UNYANA WAM UNOBUNGOZI OBUSONGELA UBOMI BAMANDONGOMANE. - IIMEKO ZEMPILO
Unyana wam unobungozi obusongela ubomi bamandongomane. Nantsi indlela esiLawula ngayo.
Xa ndandisengumntwana, ndalwa nengxaki yokutya ukutya kwamandongomane de ndaneminyaka eli-10. Emva kokuba unyana wam, uEthan, ezelwe ngo-2010, ndaye ndacinga ukuba naye, ngaba uza kuba ngumthwalo wokutya okwandayo. Oogqirha bathi ungaqala ukwazisa ukutya okwaziwayo njengezifo zokwaliwa kwangoko kwiinyanga ezintandathu, ngoko ke umama kaEthan kwaye ndamnika intwana yeyogathi, amaqanda, kunye netshizi. Konke kwahamba kakuhle. Kodwa khange sibenathamsanqa ngebhotolo yamandongomane.
Iintloko zentloko luphawu lwesifo secovid
Ngomnye uMgqibelo xa u-Ethan wayeneminyaka emalunga ne-2-sasilumkile ukuqala ngaphambi koko, ngenxa yamava am-sanika uEthan incasa yakhe yokuqala yebhotolo yamandongomane. Kwakungaphantsi komnwe, kodwa amehlo akhe aqala ukunkcenkceshela kwangoko, waye kurhawuzelela, kwaye imingxunya yavela ebusweni nasezandleni zakhe. Kamva ndafunda ukuba ukubanempendulo engaphezulu kwesinye kumanqwanqwa kuthathwa njengemeko engxamisekileyo. [Inqaku lika-Ed: Funda ngakumbi malunga nendlela yokukwazisa ngokukhuselekileyo umntwana kumantongomane Apha .]
Silinde phantse iiyure ezine ngaphambi kokuba aphendule.
Sasihlala ngaphantsi kwemizuzu emihlanu ukusuka esibhedlele kodwa kwangelo xesha lifutshane, u-Ethan wayebonakala esiba mandundu. Uwele ngaphakathi kwaye waphuma ezingqondweni kwaye ebengadibani. Kwakungathi uyozela kwaye uzama ukulala. Sizame ngamandla ukumgcina evukile kwaye ephendula, nto leyo ibisoyikisa.
Ukufika kwethu kwigumbi likaxakeka, bakhawuleza banika u-Ethan i-EpiPen, emva koko bayilandela ngolunye uhlobo lwe-steroid ukuqhubeka nokuzola kweempawu zakhe. Ukusukela ngoko ibingumdlalo wokulinda. Oogqirha bafuna ukuqinisekisa ukuba iyeza liyasebenza ngokwenene, kwaye kwakungekho thuba lokuphendula kwe-biphasic, apho iimpawu zihamba ekuqaleni, kodwa emva kweeyure kamva kubuya. Silinde phantse iiyure ezine ngaphambi kokuba unyana wam acace gca, indlela awayeziphendula ngayo yayilawulwa, kwaye wabuyela kwimeko yesiqhelo kwakhona.
Ukuphila ubomi obungena peanut
Emva kotyelelo esibhedlele, sayisusa yonke into endlwini yethu-kwaye ndithetha yonke into-eyayisekwe kumandongomane. Nditsho nezithako zezinto ezinje ngeefriji ezisikiweyo zekrisimusi esingazange sinike ingcinga yesibini ukuba kufuneka zihlolwe ngekama yezinyo elungileyo ukuqinisekisa ukuba azilungiselelwanga ngaphakathi, kunye, okanye kufutshane namandongomane okanye ioyile yamandongomane. Ngethamsanqa, isikolo u-Ethan awayefunda kuso ngelo xesha sasingena peanut ke loo nto ayizange ibe lixhala kuthi.
U-Ethan kunye nam sasinxibe iinjini zomtshato kumtshato wakhe-malunga neminyaka emibini edlulileyo ngoku- kumama wakhe webhonasi uAndrea .
Ngokukhawuleza phambili iminyaka esibhozo, kwaye sinento yonke esinayo kwisayensi. U-Ethan ngoku uneminyaka eli-10, kwaye asikhange sibe nazo naziphi na iimpendulo ukusukela kwinto yokuqala enkulu. Inxalenye yesizathu kukuba, ndiyacinga, kuba sithathe ixesha lokumfundisa, kwaye simazisa ngobunzima bento enokwenzeka ukuba angatya amandongomane okanye ibhotolo yamandongomane. Simfundise ukubuza imibuzo enje, Ngaba inayo amandongomane kuyo? okanye Ngaba le nto iphekwe kwioyile yamandongomane?
Wayehlala nomama wam kwakanye, kwiminyaka eliqela eyadlulayo, kwaye wamnika ukutya okuziinkozo. Nangona yenziwe nge-nutty yokufakelwa, u-Ethan wathi kuye, Hayi, andinako oko. Wayeqonda ukuba yayinegama le-nut kulo kwaye oko kwakuthetha ukuba ayinguye. Wayemalunga neminyaka emithathu ubudala ngelo xesha, kwaye ndandizidla kakhulu ngaye.
Kule mihla, asikho ngqongqo njengakuqala. Ixesha elingaphezulu, kuvavanyo, impazamo, kunye nokujonga, saqonda ukuba u-Ethan's allergies ungakumbi malunga nokusetyenziswa, kwaye ungaphantsi kwesiphumo nje sokujikeleza amandongomane. Oko kwathethi, umfazi wam ngoku — umama webhonasi kaEthan- kwaye kusafuneka ndiqaphele xa ekhona emhlabeni. Xa esiya kwindlu yomhlobo wakhe, ndisenza into yokuba ndibize abazali ndibakhumbuze ukuba unyana wam unengxaki yokutya amandongomane kwaye ubazise ukuba i-EpiPen yakhe isemgodleni wakhe. Ngokutyibilika nje kube kanye ngengozi, isifo sakhe somzimba sinokulityalwa. Ndiyathemba ukuba njengam, uEthan uya kuthi ekugqibeleni akhule ngaphandle komzimba wakhe. Njalo ngoku, uyandibuza ukuba uya kukhula na. Ndicinga ukuba kungenxa yokuba ufuna ukuzama iilekese ezahlukeneyo. (Zonke ezona zibalaseleyo zibonakala ngathi zinamantongomane!) Kodwa nangona u-Ethan engenazo ii-Snickers bar, wonwabile, usempilweni, unamandla- kunye neSour Patch Kids kunye neTwix (uthi uyayithanda eyona Twix yasekhohlo!) Mahle kakhulu. [ Inqaku lika-Ed: Ukuba umntwana wakho une-peanut allergy, soloko ujonga i-allergist yomntwana wakho ukuze afunde ukuba yintoni iimveliso zikhuselekile kubo.]
I-lymph nodes idumbile luphawu lwe-covid
ususa njani isisu sehomoni
kutheni ndidinwe kangaka